Mampiaraka sy Hanambady Filipiana miaraka Tsiroaroa ny Fiainana
American ny vehivavy tia ady sy mitaky zavatra tsotra fotsiny tsy mahazo aina miaraka ny ara-nofo ny anjara asany amin’ny maha-vehivavy. Maro ny Tandrefana indrindra fa ny Amerikana, ny olona izay mahazo manambady Filipianina mianiana izy ireo fa hanao ny tsara indrindra vadiny eo amin’izao tontolo izao. Nahoana no Filipinas malaza be eo Tandrefana ny olona? Filipiana vehivavy manana be dia be ny handresy toetra izay mahatonga ny nofy mpiara-miasa ho an’ny Amerikana ny olona. Manana manaitra hatsaran-tarehy voajanahary, namana sy be fitiavana toetra, manetry tena sy mahay mitsikera izy ireo, amim-pifaliana ny natiora, tidiness, ary tsy misy fepetra ny fitiavany ny vadiny. Ao ny zava-nitranga, Filipinas dia tena manohana ny fianakaviana, asehoy foana ny fanajana ny loholona, ary dia tia ny fikarakarana ny zanany. Izy ireo dia tsy mahafoy ny ankizy na ny olona marary ny ampahany ny kolontsaina. Amin’ny ankapobeny, dia ireo tena tia, ny fikarakarana, sy tsy mivadika sy tsy olana momba ny endrika ara-batana na ny fahanterana ny mpiara-miasa. Indrindra Filipiana ankizivavy dia taizaina ao amin’ny mpandala ny nentin-drazana nentim-paharazana sy ny rivotra iainana, ary ho azy ireo, ny fanambadiana dia ny fanoloran-tena. Filipinas manana bebe kokoa nentim-paharazana ny fomba ny fanambadiana raha oharina amin’ny tandrefana ny vehivavy, izay ny fanambadiana fotsiny ny raharaham-barotra fifanarahana. Rehefa mifidy ny nofy Filipina ampakarina, dia tena zava-dehibe fa misy ny fitokisana sy ny fitiavana ary ny fahatsapana marina eo samy ianareo. Matetika, ny Filipiana tovovavy ihany no hanambady ny lehilahy iray tena tia. Noho ny olana ara-toekarena ao Filipina, maro be fitiavana Filipinas vonona hanambady vahiny. Ianao dia afaka mora foana hihaona mahafinaritra Filipinas ao amin’ny Internet. Olona maro ao Filipina dia tsy afaka manam-bola ny solosaina miaraka amin’ny fifandraisana Aterineto ao an-trano, fa izy ireo no tia ny lomano ny ‘harato amin’ny cybercafé izay matetika mampiaraka toerana ho an’ny Filipiana ankizivavy. Matetika, Filipinas liana amin’ny fitadiavana amin-kitsimpo ny fifandraisana. Nahazo nisoratra anarana tao amin’ny aterineto mampiaraka toerana dia iray amin’ireo fomba haingana indrindra mba hahazo ampahafantarina ny mety ho Filipiana ampakarina, sy ny lamba fanakonana ny fifanarahana. Rehefa hiditra ny Filipiana mampiaraka toerana, dia tokony mamorona tsara tarehy ny mombamomba tsara sary ny tenanao. Ataovy ao an-tsaina, tsy mitady ny fanambadiana, ary aza adino fa ny fanambadiana dia foana lehibe raharaha, indrindra fa amin’ny Filipinas. Indray mandeha ianao no nahita ny mety ho Filipina tia na ampakarina eo amin’ny ‘harato, tokony drafitra ho an’ny famangiana ny Philippines.
Tsarovy, ny Filipiana mpandala ny nentin-drazana sy ny zavatra toy izany dia tsy ho antenaina avy amin’izy ireo.
Dia manantena anao hitsidika azy ireo aloha ho mariky ny fanajana
Alohan’ny handeha ho an’i Filipina, dia tokony hahafantatra amin’ny Filipiana kolontsaina, fomba amam-panao, sy ny fahalalam-pomba. Izany no tsara indrindra mba hihaona amin’ny zazavavy ao an-tranony eo anatrehan ny fianakaviana, izay dia mamorona endrika tsara sy ny soso-kevitra ianao ny lehilahy izay lehibe momba ny ny fifandraisana. Tsarovy, ho an’ny Filipiana ankizivavy, ny fianakaviana ny mpikambana’ ny fankatoavana dia ny laharam-pahamehana ambony indrindra. Raha fotsiny ianao any Filipina na dia tsy nanao drafitra, misy vintana ianao, dia mety hihaona ratsy ny olona hoe iza no te hanararaotra ny anao, satria ianao no vahiny. Filipiana tovovavy no tena tsy mivadika ny mpiara-miasa, ary tokony ho toy izany koa toy izany fa izy matoky anao na dia ao amin’ny lavitra fifandraisana. Raha toa ianao ka tafiditra ao anatin’ny fifandraisana matotra amin’ny Filipiana iray, dia aoka ho fantatrareo fa manao ny zavatra rehetra lazainao. Tokony hilaza aminy fa tia azy, ary midika izany amin’ny fonao rehetra. Raha omena ny teny izy dia tsy maintsy manao ny zava-drehetra mba hitondra azy ho any amin’ny taniny, ka hanambady azy.
Copyright Hub Pejy Inc
ary ny tsirairay avy tompony. Vokatra hafa sy ny orinasa anarana aseho mba ho famantarana ny tsirairay tompony. Hub Pejy® dia voasoratra Fanompoana Mariky ny Foiben’ny Pejy, Inc. Hub Pejy sy ny Hubbers (mpanoratra) dia mety mahazo vola miditra eto amin’ity pejy ity izay mifototra amin’ny affiliate ny fifandraisana sy ny dokam-barotra miaraka amin’ireo mpiara-miasa ao anatin’izany ny Amazon, ny Google, ary ny olon-kafa. Toy ny mpampiasa ao amin’ny EEA, ny fankatoavana dia ilaina amin’ny zavatra vitsivitsy. Mba hanome ny tsara kokoa namany sary traikefa, miaraka tsiroaroa ny fiainana mampiasa mofomamy (sy ireo hafa mitovitovy amin’izany ny teknolojia) ary mba hanangona, dingana, ary mizara ny angon-drakitra manokana. Azafady mifidy izay faritra ny asa fanompoana izay manaiky ny hanao izany
← Filipina Chat, Filipina Chatroom, Filipina Any Amin'ny Karajia, Filipina Amin'ny Chat Toerana
American Filipiana Fifandraisana avy any Filipina Mampiaraka Toerana →